Somaliland Guddida Loo Saaray Rabshadihii Dugsiga Nuuradiin Oo Soo Saaray Go’aamo - #1Araweelo News Network
Somaliland Guddida Loo Saaray Rabshadihii Dugsiga Nuuradiin Oo Soo Saaray Go’aamo
Waxay Soo Saareen Go’aamo Dhawr Qodob Ah
Hargeysa(ANN)- Koox Guddi ah oo Wasaaradda Waxbarashada Somaliland u xil-saartay inay baadhis dhamays tirsan kusoo sameeyaan xaaladda dhabta ah ee dhacdadii foosha xumayd ee lagu bur-buriyay Dugsiga Sare ee Wiilasha Nuuradiin Schools ee magaalada Hargeysa March 3, 2021.
Guddida ka kooban Lix xubnood, ayaa maanta soo saaray go,aamo 14 qodob ah, kuwaas oo u dhignaa sidan: –
In laamaha denbi baadhista iyo dacwad oogista qaabilsan ee Ciidanka Booliisku baadhis qotodheer oo degdeg ah ku sameeyaan dhacdadan. Isla markaana dacwad lagu oogo cid kasta oo ku lug lahayd khasaaraha dugsiga loo geystay, si waafaqsan shuruucda dhaqangelka ee dalka.
In mulkiilaha dugsigu siiyo maamulaha dugsiga madaxbannaani fulineed oo buuxda; si maamuluhu u helo awoodo maamul oo uu go’aan kaga gaadhi karo dhacdooyinka maalinlaha ah ee dugsiga una guto xilkiisa shaqo sida ku cad qodobka 103aad ee Xeerka Waxbarashada Qaranka Lr.77/2018.
In waalidiinta si dhaw ula socdaan xaalada waxbarasho ee ardayda. Isla markaana ka qayb-qaataan dhismaha Guddi Waalidiinta Dugsiga oo door muuqda ku yeesha horumarinta iyo maamulka dugsiga iyo waliba hawlaha waxbarasho ee lagu kobcinayo garaadka ardayda dugsiga.
Guddidu waxa ay go’aamisay inaan ardayda laga qaadi karin lacag aan ahayn feega bisha
Waxa la farayaa maamulka dugsiga wiilasha ee Nuuradin iyo dugsiyada kale ee dalka in aan ardayda laga qaadi karin lacago ka baxsan feega dugsiga, haddii aan ogolaasho qoraal ah laga haysan Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska.
Guddidu waxay go’aamisay ina baadhis dheeraad ah lagu sameeyo Buugaagta Manhajka Qaranka oo lagu xardhay magaca Dugsiyada Nuuradiin, iyagoo aan ogolaansho laga haysan Wasaaradda Waxbarashada; isla markaana ardayda dugsiyada Nuuradiin dhigata ku qasba inay iibsadaan buugaagtaa ay Nuuradiin ku qoran tahay oo keliya. Kuwaasoo lagu iibiyo qiimo aad uga sarreeya, kaas oo xad-gudub ku ah hanaanka dhaqaale ee suuqa xorta ah. Sidoo kale guddu waxay goaamisay in dugsiga Nuuradiin joojiyo iibka buugtaa laga bilaabo marka go’aankani soo baxo.
In maamulka dugsigu aanu ardayda iyo waalidiinta wax talaabo ah ka qaadin ilaa inta baadhista hay’adaha nabadgelyadu soo dhammaystirmayaan.
Guddida waxa u caddaatay in tirada ardayda ah fasalada dugsiga wax-ku-bartaa ay aad uga badan yihiin tirada ay waajibiyeen Siyaasada Waxbarashada Qaranka iyo Hab-raaca Xanuunka KALA-ROORA (COVID19) oo labaduba waajibiyay inuu arday waliba helo mitir laba jibaaran (Tusaale ahaan fasalka cabirkiisu 48 mitir oo laba jibaaran, waxaa markiiba wax ku fhigan kara 45 arday ugu badnaan).
Si dhawro haybadda goobaha waxbarasho ee nidaam sharciga waafaqsan ku shaqeeya, maanta laga bilaabo cid kasta oo ku kacda magac-gub been abuur ah oo lagula kacay goob waxbarasho waxaa lagu oogi doonaa dacwad ciqaabeed. Iyadoo wasaaraddu dhiirigelinayso in qof kasta oo goob waxbarasho dhaliilaya ama ka cabanayaa uu qoraal rasmi ah u soo gudbiyo xafiisyada Wasaaradda Waxbarashada ama ay soo wici karaan Xarunta Wicitaanka Dadwaynaha ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Sayniska oo lambarkeedu yahst 9666
Guddidu waxa ay go’aamisay in arday kasta oo ay ku caddaato rabashadihii dugsiga ka dhacay ay wasaaraddu si gaar ah uga qaadi doonto talaabooyinkan:-
Guddidu waxa ay go’aamisay in macallimiinta iyo maamulka ay ku caddaato inay ka qayb galeen ama iyagoo ka-hortagi kata joojin waayay rabashadii dugsiga ka dhacay ay wasaaraddu si gaar ah uga qaadi doonto talaabo sharciga waafaqsan
In dugsiga Wiilasha ee Nuuradiin la furo Sabtida 13/03/2021.
Fulinta iyo dabagalka go’aamadan waxaa masuul ka ah gudoonka Waxbarashada ee Gobolka Maroodi Jeex iyo Degmada Hargeysa.
Go’aankani waxa uu soo baxay maanta oo taariikhdu tahay 10/03/2021.
Xuseen Cabdi Cawil Guddoomiye
Sucaad Maxamed Cabdi Gudd ku-xigeen.
Cabdiqadir Cabdilahi Jaamac (Jeex) Xubin
Yuusuf Xuseen Maxamed Xubin
Cabdikarim Xasan Maxamed Xubin
Aamina Casayr Magan Xubin